Shariif Xasan “Waddooyinka Bakool dhawaan waa la furayaa” – Radio Muqdisho
Madaxweynaha Maamulka Koonfur Galbeed Mudane Shariif-Xasan Sheekh Aadan, ayaa sheegay in dib loo furi doono waddooyinka gobolka Bakool kaddib markii uu booqasho ku tagay degmada Xudur ee xarunta gobolkaasi.
Shariif Xasan Sheekh Aadan oo la hadlay dadka degaanka ayaa sheegay in furitaanka wadooyinka soo gala degmada Xudur iyo guud ahaan kuwa gobolka ay lagama maarmaan tahay, isagoo ugu baaqay shacabka in ay la shaqeeyaan si looga adkaado malleeshiyaadka Al-Shabaab.
“Al-Shabaab jidadka ayay gooyeen, dhibaato badan ayaa jirta, in dadkaan jidadka loo furo, si loola dagaallamo (Al-Shabaab) ciidammo jidadka fura in la helo, waxbaayaha dhimmana la dhammaystiro ayaan caalamka iyo dowladda dhexe ugu baaqayaa” ayuu yiri Shariif Xasan.
Maleeshiyaadka Al-Shabaab ayaa go’doomiyay qeybo ka mid ah gobolka Bakool. Kaddib markii laga saaray magaalooyinka waaweyn ee gobollada, waxay diideen in gaadiidka xamuulka sida ay maraan waddooyinka si ay u gaaraan magaalooyinka, tallaabadaas ayaa saameyn xun ku yeelatay nolosha shacabka ku nool magaalooyin ay Xudur ka mid tahay oo gobolka ku yaalla.